गहुँलाई मल : कृषिमन्त्री भुसालको दाबी कति सत्य?
आयोमेल संवाददाता काठमाडौं - बुधबार, कात्तिक २६, २०७७
‘अनेक समस्याबीच अहिले रसायनिक (रासायनिक) मलको आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। वितरणमा कहीँकतै समस्या हु सक्छन्, समाधान गरिन्छ। किसानले मल पाउँछन्।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले मंगलबार साँझ ७ः०५ बजे सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा यसरी ट्विट गर्दा ‘रासायनिक मलबिना धान रोपेका किसानले गहुँ सिजनमा मल पाउने भए' भन्ने अर्थ लाग्याे।
मन्त्री भुसालले उल्लेख गरे झैं रासायनिक मलको आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ त? आयोमेलले तथ्य जाँच गरेको छ।
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब ७ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती हुन्छ भने साढे १९ लाख टनहाराहारी उत्पादन हुन्छ।
सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर केसीका अनुसार गहुँबालीका लागि मात्र ७० हजार टन युरिया, ६० हजार टन डिएपी र पाँच–सात हजार टन पोटास मल चाहिन्छ।
जहिल्यै मल अभाव हुने भएकाले भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रका किसानले चोरीपैठारीको मलसमेत प्रयोग गर्ने गर्छन्। तसर्थ, कृषिको तथ्यांक र वास्तविक मागसमेत मेल खाँदैन।
किसानले गहुँ छर्न सुरु गरिसकेका छन्। कृषि विज्ञहरूका भनाइमा गहुँ छर्दा डिएपी मल आवश्यक पर्छ भने करिब एक महिनापछि युरिया मल चाहिन्छ।
सरकारी अनुदानमा मल प्रबन्ध गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनसँग बुधबारसम्म १९ हजार टन डिएपी, साढे १७ हजार टन युरिया र ९ हजार टन पोटास मौज्दात छ।
कृषिसँग १० हजार टन डिएपी र ९ हजार टन पोटास रहेकामा युरिया मलको मौज्दात छैन। साल्ट ट्रेडिङसँग साढे १७ हजार टन युरिया र ९ हजार टन डिएपी छ।
कृषिमन्त्री भुसालको भनाइसँग तथ्यांक मेल खाँदैन।
मल किन आएन?
धान रोपाइँ सिजनमा ५० हजार टन रासायनिक मल नल्याएपछि कारबाहीमा परेको सैलुङ ग्रुप अफ कम्पनीअन्तर्गतको सैलुङ इन्टरप्राइजेजले गहुँ सिजनमा पनि युरिया नल्याउने पक्का छ।
कृषि सामग्रीले ३० हजार टन युरिया मल आयातका लागि गत असारमा सैलुङलाई ठेक्का दिएको थियो। प्रबन्ध सञ्चालक केसीका भनाइमा बन्दरगाहमा मल सिपिङ गरिसक्नुपर्ने म्याद गुज्रिसकेको छ। सम्झौता अवधि पनि गु्रजिने अवस्था आइलाग्दा मल आएको छैन। अब कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले क्रमशः २५ हजार टन युरिया र २० हजार टन डिएपी मल आपूर्तिको ठेक्का पाएको थियो। ‘मंसिर लाग्न थाल्यो। मल आउने आधार रहेन,’ केसीले भने।
उनका अनुसार इन्डियन पोटास लिमिटेड (आइपिएल) ले ५० हजार टन मल निर्यात गर्नेछ।
साल्ट ट्रेडिङले पहिलो चौमासिकमा ३० हजार टन युरिया र २० हजार टन डिएपी आयातको कोटा पाएको थियो। डिएपी मल कोलकाता पुगिसकेको र तिहारलगत्तै आयात हुने कर्पाेरेसनका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए।
सैलुङ र होनिक मल्टिपलले धान सिजनमा २५–२५ हजार टन युरिया आयात गर्न नसकेपछि कृषि सामग्रीले ठेक्का रद्ध गरेको थियो। र, बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया पैंचोमा ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो।
तर, बंगलादेश पैंचोमा दिन तयार नभएपछि सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ५० हजार टन युरिया बंगलादेशबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले गहुँबालीका लागि ५० हजार टन युरिया मल खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसका लागि बंगलादेशले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।
‘हामीले मात्र निर्णय गरेर हुँदैन। बंगलादेश सरकारले पनि निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र समझदारीमा हस्ताक्षर गरेर प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ढुवानी थाल्दा पनि पूरै ५० हजार टन मल नेपाल पुग्न एक महिनाहाराहारी समय लाग्छ।’
सरकारले ५० हजार टन युरिया गहुँबालीकै लागि ल्याउने भने पनि सम्भावना परपर हुँदै गएको छ। गहुँ छर्न सुरु भइसक्दा पर्याप्त डिएपी मल छैन नै, अब एक महिनाभित्र युरिया मल आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि पनि तत्काल चाँजोपाँजो मिलिसकेको छैन।